at 9:50 AM Labels: အခေါ်အဝေါ်
ရှာရတဲ့အခါ ခက်ခဲတတ်ပါတယ်။ မြန်မာလိုသိပေမယ့်
အင်္ဂလိပ်လို ဘယ်လိုခေါ်လဲ၊ ဘယ်နားတွေမှာရတတ်လဲလို့
ရှာဖွေရတာ တစ်ဒုက္ခ။ ဒါကြောင့် ပုံလေးတွေနဲ့ အခေါ်အဝေါ်
လေးတွေ တင်ပေးရင် ပိုကောင်းမလားလို့။ သိတဲ့လူတွေလဲ
Chick Peaလို့ ကိုဂျေပြောတဲ့အတိုင်းရှာလိုက်တာ
ဒီပုံတွေ့ပါတယ်။ ဒီပဲမျိုးကို များသောအားဖြင့် Asiaဆိုင်တွေမှာ
credit to ကိုဂျေ
. June 4, 2008 at 1:58 AM
ပဲပြုတ်ပြုတ်တဲ့ ပဲတော့ ရှာမတွေ့ဘူး။ ဘယ်လိုခေါ်လဲ မသိဘူး။
am ma lu ya... how to pronounce "hnan see(oil)"
pls continue this label. It is very useful..